Xinhua Myanmar - အမေရိကန်လွှတ်တော်အဓိကရုဏ်းမှုကို “ ၉/၁၁ - ပုံစံ ကော်မရှင်” ဖွဲ့၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဟု လွှတ်တော်ဥက္ကဌပြော
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ ကက်ပီတိုလွှတ်တော်အဆောက်အဦတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေသော လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နန်စီပလိုစီအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Europe
ဝါရှင်တန်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်အား ဒုတိယအကြိမ်စွပ်စွဲပြစ်တင်ရန် အထက်လွှတ်တော် ဆီးနိုတ်၌ မဲခွဲရာတွင် အပြစ်မရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ရက်အကြာ အမေရိကန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နန်စီပလိုစီက ကက်ပီတိုလွှတ်တော်အဆောက်အဦ၌ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အလွန်အမင်းစိုးရိမ်စရာကောင်းသည့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် “ ၉/၁၁ - ကော်မရှင်” ပုံစံ လွတ်လပ်သော ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းသွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။
“ ကျွန်မတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ဖို့ ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ကက်ပီတိုလွှတ်တော်အဆောက်အဦထဲမှာ ပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က အဖြစ်အပျက်နဲ့ဆက်စပ်လို့ အကြောင်းအရာတွေ နဲ့အချက်အလက်တွေကို အစီရင်ခံဖို့ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပကနေပြီး သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ၉/၁၁ ပုံစံ ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းသွားပါမယ် ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
“ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ နဲ့ အဲဒါမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမဖြစ်ပွားဖို့ ဘယ်လိုသေချာခိုင်မာအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Honore က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်” ဟု ရာထူးမှအနားယူသွားပြီဖြစ်သည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး Russel Honore အား ကိုးကား၍ ပလိုစီက ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော လက ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကက်ပီတိုလွှတ်တော်၏ “ လုံခြုံရေးအခြေခံအဆောက်အဦ”အား ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ရေးတွင် ဦးဆောင်ရန် ပလိုစီသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအား တောင်းခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ သူ့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေက သိပ်ကိုရှင်းလင်းပါတယ်၊ စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုကနေပြီး ဒါက ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ အမှန်တရာကို သိဖို့ ကျွန်မတို့လုပ်ဆောင်ရမှာပါ” ဟု ပလိုစီကဆိုသည်။ ထို့ပြင် ကက်ပီတိုလွှတ်တော် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ရန် ထပ်မံ အားဖြည့်တင်းရေးအတွက်လည်း ပလိုစီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
၉/၁၁-ပုံစံ ကော်မရှင်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရန် အမေရိကန် အထက်အောက် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးမှ အတည်ပြုချက်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအား ဥပဒေတစ်ရပ်အဖြစ် လက်ရှိသမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်ကြောင်း CNN သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များကိုခေါင်းဆောင်များမှ ရွေးချယ်ရမည်မဟုတ်သလို အစိုးရအဖွဲ့ ပြင်ပမှဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
ပုန်ကန်မှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုကာ ကက်ပီတိုလွှတ်တော် အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုတွင် ထရမ့်အနေဖြင့် အပြစ်မရှိကြောင်း အမေရိကန် ဆီးနိုတ်အထက်လွှတ်တော်က ပြီးခဲ့သော စနေနေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယင်းအဓိကရုဏ်းဖြစ်မှုအတွင်း လွှတ်တော်လုံခြုံရေးရဲအရာရှိတစ်ဦးအပါအဝင် လူ ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
#U.S, #House, #9/11, #commission, #capitol, #Xinhua
WASHINGTON, Feb. 15 (Xinhua) -- U.S. House Speaker Nancy Pelosi on Monday announced plans for establishing an independent "9/11-type commission" to investigate the deadly Jan.6Capitol riot, two days after former President Donald Trump was acquitted in his second impeachment trial by the evenly split Senate.
"To protect our security, our next step will be to establish an outside, independent 9/11-type Commission to investigate and report on the facts and causes relating to the January 6, 2021 domestic terrorist attack upon the United States Capitol Complex ... and relating to the interference with the peaceful transfer of power," Pelosi wrote inaletter to House Democrats.
"For the past few weeks, General Honore has been assessing our security needs by reviewing what happened on January6and how we must ensure that it does not happen again," Pelosi wrote, referring to retired Lt. General Russel Honore who she tapped to leadareview of Capitol's "security infrastructure" following the riot last month.
"It is clear from his findings and from the impeachment trial that we must get to the truth of how this happened," Pelosi said, adding that the House will also put forth supplemental spending to boost security at the Capitol.
A 9/11-type commission would be established byastatute passed by both chambers of the U.S. Congress and signed into law by the sitting president, saidaCNN report, adding that members of the commission would not be elected leaders and would be outside the government.
The U.S. Senate on Saturday acquitted Trump on the article of impeachment for inciting insurrection leading to the Capitol riot. Five people died in the attack, includingaCapitol police officer.
U.S. House Speaker Nancy Pelosi speaks duringapress conference on Capitol Hill in Washington, D.C., the United States, Feb. 4, 2021. (Photo by Ting Shen/Xinhua)
Next Article ဗြိတိန်အစိုးရက နိုင်ငံခြားသွားလိုသူများအတွက် “ကာကွယ်ဆေးပတ်စ်ပို့” ထုတ်ပေးရန် အစီအစဉ် လုပ်ဆောင်တော့မည် မဟုတ်ဟုဆို